Sidlala iFortinte kwi-Mi9 ukuze ubone ukusebenza kwabo ngexesha lokwenyani | I-Androidsis
Sidlala iFortnite kwi-Mi9, ​​umdlalo opheleleyo ngaphandle kokusika, ukuze ubone ukusebenza kwawo okwenyani
UFrancisco Ruiz | | Fortnite, Xiaomi
Akukho ndlela ibhetele kunokubona kunye nokubonisa ukusebenza okwenyani kwesiphelo se-Android kunokuba usinike iswekile eninzi, kwaye kungenxa yesi sizathu sinye Siqale ukudlala iFortnite kwiMi9 ukuze wena, ocinga ukuthenga enye, ubone ngexesha lokwenyani ngaphandle kokuphazamiseka kwindlela esiqhuba ngayo isixhobo kwiimeko ezigabadeleyo.
Ukwenza nzima ngakumbi ukuba kunokwenzeka, kwaye kunjalo Ukudlala i-Fortnite kwisixhobo se-Android namhlanje kunokwenzeka ukuba kungomnye wemisebenzi enzima kakhulu esinokukubuza ngokwendlela yokusebenza, imizobo kunye nesandiUkongeza, kwangaxeshanye senza ukurekhodwa kwesikrini ukuze kwividiyo endiyishiya apha ngezantsi kule post, sinokuba namava emidlalo yokuntywilisela ngokupheleleyo kuba singena ngaphakathi kwiscreen seXiaomi Mi9. Ke ndicebisa ukuba ungathandabuzi ukuba ungayithengi iMi9 okanye cha, jonga le vidiyo kuqala.
Ndimbi kangakanani, kakhulu kule nto dlala iFortnite kwiMi9Kulungile ukusuka kwi-Mi9 okanye kwi-Play 4 kufuneka ndivume ukuba ndiyiphakheji iyonke, kangangokuba elona qhinga lam libalaseleyo lokudlala kwimodi yedwa sisicwangciso sehlathi. Isicwangciso ekungekho okunye ukuzama ukuqhubela emfihlakalweni, kuhlala kufihlwe ematyholweni ukuzama ukuhlala kwindawo efanelekileyo. Ndithathe isigqibo sokuba umdlalo ukwimo yeqela le-melee.
Isigqibo sokudlala kwimowudi yokulwa kweqela lilula ukuze ukonwabele umdlalo weqonga onokuthi uXiaomi Mi9 ngokungathandabuzekiyo asinike ixesha elide kule mi sebenzi efuna amandla okusebenza ngokukhohlakeleyo.
Un Ukusebenza okungenakubethwa apho maxa onke iXiaomi Mi9 iye yaziva ikhululekile kwaye i-agile kakhulu, ukukwazi ukuhambisa enye yezona midlalo zintle ze-Android ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuphefumla okanye ukufudumeza nangaliphi na ixesha.
Ukuba sidibanisa koku ngamaxesha onke omdlalo bekurekhoda isikrini kunye nesandi semakrofoni ngezixhobo ezongezelelweyo ezifunwa ngulo msebenzi, sijamelene nesiphelo esinamandla kakhulu apho umgangatho weprosesa yeQualcomm Snapdragon 855 kunye nomzobo wakhe onikezelwe kurhulumente ngaphezulu kokuphila ngoku kulindelwe kuye. Kwaye oku ngaphandle kokubhenela ekuthengeni i-terminal yewaka lama-euro okanye ngaphantsi, kwaye kufanelekile ukukhumbula ukuba ngoku singafumana iXiaomi Mi9 ye I-449 yee-Euro zemodeli ene-6 Gb ye-RAM kunye ne-64 Gb yokugcina kwangaphakathi, nangayo I-499 Euro kwimodeli ene-6 Gb ye-RAM kunye ne-128 Gb yokugcina kwangaphakathi ukusuka kwivenkile yakhe ekwi-Intanethi ngokunqakraza kule khonkco.
Ukuba ukhetha ukuyithenga eAmazon eSpain ngenxa yesiqinisekiso sokurhoxa nayo yonke into esinikwa yiAmazon engaphezulu kwazo zonke ezinye iinkampani zentengiso ezikwi-Intanethi, khumbula ukuba uneentsuku ezingama-30 zokuyivavanya kakuhle kwaye ukuba awuqinisekanga bayayibuyisa imali , emva koko uya kuba nakho ukuyifumana Ngexabiso elifanayo kunye nokuhanjiswa ngosuku olunye kubathengi beNkulumbuso ngokunqakraza kwikhonkco lokudibana.
Unxibelelwano oludibeneyo apho i-Androidsis izakuthatha ikhomishini encinci kodwa kuwe njengomsebenzisi kunye nomthengi ngekhe nangaliphi na ixesha lithethe ukonyuka kwexabiso lesiphelo, kungaphantsi kakhulu.
Le yeyona ndlela intle yokusebenzisana ne-Androidsis kwaye unike inkxaso yakho kwiBhlog ngaphandle kokukuxabisa nesenti enye.
Ekuphela kwento endingayigqibanga ukuyithanda malunga neMi9, ethi xa ubona ividiyo eqhotyoshelweyo endiyishiyileyo ekuqaleni kwesi sithuba, ndiphawule amaxesha aliqela, sisikhundla sezithethi ezibekwe emazantsi i-terminal, indawo apho ubambe i-terminal kwimowudi ethe tyaba ukuze udlale imidlalo enje ngeFortite, isandi siphela phantse sicime ngokupheleleyo, sisinyanzela ukuba sahlule isandla kancinci ukuze siviwe kwiimeko, , kakhulu ukuba ungonwabi kakhulu ukuba uthwale.
Nokuba oku okanye sidlala nge-Bluetooth headset ukusukela Ikwanayo nethuba lokongeza ii-headphone ezinentambo njengoko ingenayo i-3.5 mm audio jack. Nangona sinokuhlala sihlala thenga uhlobo lwe-USB ukuya kwi-3.5mm iadaptha yeJack isixhobo esiza kuthi singabizi ngaphantsi kwe-Euro enye kwaye nayo Singayifumana kwiAmazon ngokunqakraza kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Fortnite » Sidlala iFortnite kwi-Mi9, ​​umdlalo opheleleyo ngaphandle kokusika, ukuze ubone ukusebenza kwawo okwenyani
I-Samsung Galaxy A70 isungulwe ngokusesikweni eSpain
Imifanekiso yokuqala kunye neevidiyo zeMario Kart Tour yeefowuni eziphathwayo zihluziwe